Huawei anoti kupeta kweHuawei Mate X2 "hakusi kushoma", asi pamwe inhema
Huawei ari kutarisirwa kuzivisa Huawei Mate X2 musi wa22 Kukadzi. Chishandiso ichi chizvarwa chavo chechipiri chinopengeka uye chichava nefomu-chinhu chakafanana neiyo Samsung Galaxy Z Fold kureva. kupeta mukati. Mune imwe teaser yakatumirwa paTwitter, kambani yakati vhezheni yavo, zvisinei, ichave "yakaderera-ishoma" inove budiriro huru yekupeta skrini. Ndizvo… [Verenga zvakawanda ...] nezveHuawei inoti kupeta kweHuawei Mate X2 "hakusi zvishoma", asi izvo zvimwe manyepo
Huawei Mate X2 teaser inovimbisa foldable skrini iri mukati mukati panguva ino
Huawei akatumira mufananidzo mutsva wetiyeya yefoni yake iri kuuya yeMate X2 inopeta uye zvinoita sekunge ichisimbisa kuti chiratidziro chinenge chiri mukati panguva ino - sezvakangoita runyerekupe. Yakapfuura yakaburitswa mifananidzo uye vashanduri vakaratidza chishandiso chakafanana neSamsung Galaxy Z Fold 2 pane yekutanga Mate X uye Mate Xs. Zvino iyo teaser, iyo inosimbisawo kuti handset ... [Verenga zvakawanda ...] nezveHuawei Mate X2 teaser inovimbisa foldable skrini iri mukati mukati panguva ino
Shanduko yaHuawei kubva pakukanganisa Android kuenda kuGoogle kunze kwave shanduko inotyisa mugore rapfuura. Iyo Huawei P40, iyo nharembozha ye2020, yakatangwa isina kuwana masevhisi eGoogle, sezvo Huawei airamba achitevera nzira yake. Yakanga ichiri chishandiso chinokwanisa uye chinosiya tarisiro yeHuawei inotevera mureza, iyo P50. Hezvino zvese zvatakanzwa saka ... [Verenga zvakawanda ...] nezveHuawei P50 uye P50 Pro: Zuva rekuburitsa, makuhwa zvaunotarisira
Iyo nyowani Huawei Mate X2 haizoshandisa Samsung inopetwa kuratidza
Tave kuswedera pedyo nekuvhurwa kweHuawei Mate X2 itsva. Chishandiso ichi chakarongerwa kuvhurwa muna Kukadzi 22, zvinoreva kuti isu tingangotanga kugamuchira matani ekudonhedza uye ruzivo nezve Huawei's nyowani inopeta. Huawei achakurumidza kuburitsa iyo nyowani nyowani yekupeta. Iyo Huawei Mate X2 ichasvika iine dhizaini nyowani inopeta yakafanana neyatinowana muSamsung ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Iyo nyowani Huawei Mate X2 haizoshandisa Samsung inopetwa kuratidza